လက်ရှိကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဗောဓိတစ်ထောင် ရပ်တော်မူဘုရားကြီး | အိမ့်မှူးသော်
လက်ရှိကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဗောဓိတစ်ထောင် ရပ်တော်မူဘုရားကြီး
လက်ရှိကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ရုပ်တုများထဲမှ အမြင့်ဆုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ၊ မုံရွာမြို့ ၊ ဗောဓိတထောင် ရပ်တော်မူ ရုပ်ပွားတော်ကြီး ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၁၃၀ မီတာ ရှိပြီး ဂျပန်မှ Ushiku Amida Buddha ရုပ်ပွားတော်ကြီးထက် ၁၀ မီတာ ပိုမြင့်သည်။
ကမ္ဘ.ာအမြင့်ဆုံး ရုပ်တုများထဲမှ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးမှာ
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Ushiku Amida Buddha ရုပ်ပွားတော်ကြီး ဖြစ်သည်။
အမြင့် ၁၂၀ မီတာ ရှိပြီး ၁၉၉၅ ခုနစ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
တတိယ အမြင့်ဆုံးမှာ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yellow Chinese Emperors Huangdi
and Yandi ဖြစ်သည်။
အမြင့် ၁၀၃ မီတာခန့်ရှိသည်။
စတုတ္ထ အမြင့်ဆုံးမှာ ယူကရိန်း နိုင်ငံ Kyivi ရှိ ၊ံHomeland -Mother
အမြင့် ၁၀၂ မီတာခန့်ရှိသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ၏ အမှတ်သညာလည်း ဖြစ်သည်။
ပဉ္စမအမြင့်ဆုံးမှာ ရပ်ရှား နိုင်ငံ၊ မော်စကို မြို့ရှိ Peter I ရုပ်တု
အမြင့် ၉၆ မီတာခန့်ရှိသည်။
ဆဌမ အမြင့်ဆုံးမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက် ဆိပ်ကမ်းရှိ Statue
of Liberty ဖြစ်သည်။
အမြင့် ၉၃ မီတာ ခန့်ရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လွတ်လပ်ရေးကို
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ အမေရိကန်၏ လွတ်လပ်ရေးကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပေးအပ်ခဲ့
သတ္တမ အမြင့်ဆုံးမှာ ရပ်ရှားနိုင်ငံ ၊Volgograd ရှိ Homeland mother ရုပ်တု
အမြင့် ၈၂ မီတာ ခန့်ရှိသည်။
အဌမ အမြင့်ဆုံးမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Lanshan ရှိ Buddha ရုပ်ပွားတော်
အမြင့် ၇၁ မီတာခန့်ရှိသည်။
န၀မ အမြင့်ဆုံးမှာ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ Rio de Janerio ရှိ Christ the
Redeemer (Christo Redentor) ရုပ်တုဖြစ်သည်။ အမြင့် ၃၁ မီတာခန့်ရှိပြီး
၁၉၃၁ ခုနစ်တွင် ဖန်တီးသည်။ တန် ၁၀၀၀ ခန့် အလေးချိန်ရှိသည်။
အမျိုးသားဥယျာဉ် ၊ Tijuca တောင်တန်း၊ အမြင့် ၇၁၀ မီတာရှိ Corcovado
Check out my web site; ranger forum
site? The account aided meaapplicable deal. I had beenalittle bit familiar of this your broadcast offered shiny clear idea
Here is my web blog :: mibsyn.dscloud.me
my web page https://www.selfhelptechniques.com